Isamsung iyaqhubeka nokuba neengxaki zokuphumeza inzwa yeminwe phantsi kwesikrini kwiNqaku 8 | Iindaba zeGajethi
Inkqubela phambili elandelayo esiza kuyibona kwihlabathi le-telephony, ngaphandle kokunciphisa kakhulu imiphetho njengoko sibonile kwi-Galaxy S8, ngokumilisela inzwa yeminwe ngaphakathi kwesikrini ukunqanda ukuyifaka ngasemva kwesikrini, into eyenza kube nzima ukufikelela kwaye ayintle kangako. Kwiinyanga ezininzi sithethile malunga nokuba kungenzeka Isamsung kunye neApple baba ngabokuqala ukuyenza, kodwa ngenxa yeengxaki ezahlukeneyo ekuye kwahlangatyezwana nazo apha endleleni, kubonakala ngathi akukho lula njengokuba kunokubonakala ngathi kuqala.
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo amarhe anxulumene neApple aqala ukujikeleza apho kwathiwa ukumiliselwa kwe-iPhone 8 kunokulibaziseka ngenxa yeengxaki ezinazo xa kufikwa ekuphumezeni inzwa yeminwe phantsi kwescreen. Kodwa ayisiyiyo kuphela, kuba i-Samsung ibonakala inengxaki nayo. Kuyabonakala indawo apho isivamvo somnwe esibonakalayo sibonakala siqaqambile Ngaphezu kwayo yonke indawo yesiphelo sendlela, ebangela ukukhanya okungalinganiyo kwiscreen seGreen Note yakho 8 elandelayo.
Ukuthatha ingqalelo yokuba i-Samsung ngumenzi weepaneli ze-OLED zeeterminal zayo kunye nezo ze-iPhone 8 elandelayo, kusenokwenzeka ukuba zombini ezi nkampani zijamelene nengxaki efanayo, ingxaki abanokuthi bayisombulule ngendlela ekhawulezayo nenobuchule ukuba bahlala etafileni basebenza kunye, into ekunokwenzeka kakhulu ukuba ingenzeki. Ngeli xesha, umenzi waseAsia IVivo ibonakala iyinkampani yokuqala yokudibanisa isivamvo seminwe phantsi kwescreen, njengoko sikubonisile kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwividiyo ethe inkampani ngokwayo yavuza. Ngokuzenzekelayo kule vidiyo, ayibonwa ukuba indawo apho ikhoyo inzwa yeminwe ikhanya ngakumbi, okanye ubuncinci ayiniki mvakalelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Isamsung isenengxaki yokusebenzisa i-sensor yeminwe engaphantsi komboniso wenqaku 8
Logama nje ingadubuli: v